4bhk (1,500 Sq Ft) Dhismaha Qaybta 11 Rohini, Delhi
Liiska Magacyada Guri: » Guryaha la degan yahay » Gole » IN » Delhi » Delhi » 4bhk (1,500 Sq Ft) Dhismaha Qaybta 11 Rohini, Delhi1
Cabbirka (Sq Ft): 1500
Waxay leedahay aag dhisme ah oo dhan 1500 sqft waxayna kiraysan kartaa Rs 26,000 bishiiba Gurigu waa mid qalabaysan Guryahaan deggenaantu waa diyaar-u-guurid Waxaa loo samaysan yahay qaab lagu siiyo nolol ku habboon U dhow dhowhow yutiilitiga dawladeed oo kala duwan Haddii aad xiisaynayso, fadlan nala soo xiriir wixii faahfaahin dheeraad ah
Sector 11 Rohini waa xaafad caan ah oo Delhi ah. Dhowr machadyo waxbarasheed, xarumo madadaalo ayaa ku yaal agagaarka iyo agagaaraha, kuwaas oo ku noolaanshaha halkan si aad ah ugu habboon. Joogitaanka xarumaha daryeelka caafimaad ee sifiican loo qalabeeyay iyo isbitaallada oo udhow dhow ayaa ka dhigaya Sector 11 Rohini mid ka mid ah meelaha la doonayo in la dego ee Delhi. Jiritaanka agabyada aasaasiga ah iyo tas-hiilaadka kale ayaa ka dhigtay inay dadka guryuhu raadiyaan guryo ay ku iibiyaan Qaybta 11 Rohini. Isku xirnaanta Qeybta 11 Comminta Rohini waa mid bilaash ku ah dadka deggan xaafadan. Qeybta 11-aad Rohini waxay si wanaagsan ugu xiran tahay qeybaha kala duwan ee Delhi iyadoo loo marayo isku xirnaanta wadooyin aad u wanaagsan iyo adeegyada basaska. Saldhigga tareenka iyo isgoyska int / intra intaba ee basaska magaalada ayaa dhowr kiilomitir u jira masaafada Sector 11 Rohini. Marka la raaco basaska gobolka iyo kuwa kale ee maxalliga ah, u safridda meelaha kuugu dhow waa mid aad u habboon. Isku xirnaanta wanaagsan waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee sababa baahida hantida ee Qeybta 11 Rohini ay si dhakhso leh u kordheeyso. Dhismeyaasha qaybta Sector 11 Rohini Bilihii ugu dambeeyay, Qeybta 11 Rohini waxay soo aragtay koboc aad u weyn oo lama huraan ah hadana waxay isu rogtay inay noqotay mid ka mid ah xarumaha dagaalada ee ugu faa'iidada badan Delhi. Isku xirnaanta jilicsani waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee kororka baahida hantida ee Sector 11 Rohini. Xawaaraha dhaqsaha badan ee horumarka ayaa soo jiidata kuwa wax dhisa oo badan si ay u iibsadaan meelayaal ku yaal Sector 11 Rohini si ay u dhisaan guryo jaban oo loogu talagalay dadka wax raadinaya.
1bhk+2t (950 Sq Ft) Builderfloor In Khirki Extension, Delhi